Umngundo Ukwenza, Inaliti Ukubumbela, Plastic Izahlulo Ukubumbela - Mestech
Ekwenziweni zomngundo kunye ziphene yokubumba
IMESTECH inenkqubo epheleleyo yokuvelisa ukungunda kweplastiki.
Metal iindawo processing
Ingxubevange yesinyithi ebalaseleyo kunye neendawo ezichanekileyo eziphezulu ziyafumaneka.
Imveliso egqibeleleyo ngokuqinisekileyo ivela kuyilo olugqwesileyo kuqala.
Imveliso entsha ukususela ekuqaleni koyilo ukuya kwimveliso kunye nentengiso.
Kukho amawakawaka eemarike, ezihlala zihlaziywa mihla le.
Iiplastiki zenziwe ngokubumba kunye nezinye iindlela zokulungisa, apho ubukhulu kunye nomsebenzi uhlangabezana neemfuno zabaqulunqi. Ngaphezu kwe-80% yamalungu eplastiki abunjwe ngenaliti yokubumba, eyona ndlela iphambili yokufumana iindawo zeplastiki ezichanekileyo. Inaliti iinxalenye zeplastiki kunye neemveliso zingene kuzo zonke iinkalo zentshukumo yabantu ...
Ukwenza kakuhle kuyilo nakwimveliso yeplastiki, kufuneka siziqonde iindidi kunye nokusetyenziswa kweplastiki. Iplastiki luhlobo lwekhompawundi ephezulu yemolekyuli (ii-macrolecule) ezifakwa ipolymerized ngokudibanisa i-polymerization okanye i-polycondensation reaction nge-monomer njengezinto ezingavuthiyo. Zininzi iintlobo zeeplastiki ezineepropathi ezahlukeneyo, kodwa kulula ukukhanya kubunzima, ...
Ibhokisi yeplastiki yonyango (ekwabizwa ngokuba yibhokisi yamayeza) okanye iibhokisi zeplastiki zonyango, zisetyenziswa kakhulu kwizibhedlele nakwiintsapho. Ingasetyenziselwa ukugcina iziyobisi, izixhobo zonyango okanye ukuziphatha xa ubona izigulana. Ibhokisi yezonyango, njengoko igama layo lisitsho, sisiqulatho sokugcina amayeza kunye nezixhobo zonyango, ezinokuthi zikhutshwe zisetyenziswe kwimeko yendawo yokuhlala ...
Ngokuphuhliswa kweshishini langoku, zininzi izinto ezibonakalayo zeplastiki. Kwangelo xesha, iimveliso zeplastiki zikwasetyenziswa ngokubanzi kwimizi mveliso eyahlukeneyo. Ngokukodwa, iinxalenye zeplastiki zichanekile ngakumbi. Ngoku makhe sabelane nawe ngeengcebiso malunga noyilo oluchanekileyo lweplastiki kunye nokubumba. Ukuhlelwa kwamalungu eplastiki ngokuchanekileyo: 1. Uyilo ...